उत्तम ब्याक्र्याट गाइड र रणनीतिहरू - Gambling Papa
1 ब्याक्र्याट के हो?
2 कसरी ब्याक्र्याट खेल्ने?
3 ब्याक्र्याट रणनीति चार्टहरू के हुन्?
4 शुरुआतीहरूको लागि ब्याक्र्याट गाइड
5 ब्याकार्ट शर्त रणनीति
6 तपाईलाई जित्न मद्दतको लागि उत्तम ब्याक्र्याट सल्लाह र युक्तिहरू
हुनसक्छ, तपाईंले क्यासिनो भित्र पस्ने मौका पाउनुभएको छैन जुन वास्तवमै बहुसांस्कृतिक अनुभव प्रदान गर्दछ। जे होस्, अवसर पाएकाहरूको लागि, ब्याक्र्याट भवनमा सबैभन्दा मनमोहक खेलहरू मध्ये एक हो। तपाईं परम्परागत कार्डहरूसँग खेल्नुहुने हुनाले, यस ’bout केही कुरा मात्र परिचित देखिन्छ। अझै, Dàjà vu को बावजुद, तपाई पट्टि नसोचीएको सुनिश्चित गर्न पर्याप्त नवीनता छ।
ब्याक्र्याट के हो?
त्यहाँ बाहिर कोहीलाई थाहा छैन यो खेल अवस्थित छ? यद्यपि हामी मध्ये धेरैले कम्तिमा यसको ’boutमा सुनेका छौं, बराबर संख्यामा कोही पनि बुद्धिमानी छैन। भाग्यवस, हाम्रो दृष्टिकोणबाट, यस्तो कुरा गर्नु सार्वजनिक अस्वस्थता हुनेछ। १ th औं शताब्दीमा उत्पत्ति भएका, स्पष्ट रूपमा, यो हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाको टुक्रा हो जुन सबैले साझा गर्नुपर्दछ।
क्यासिनो कार्ड खेल जुन घर बिरूद्ध खेलाडीहरू पिट्स गर्दछ:
ब्ल्याकज्याकको समान, जब तपाईं बेकार्याटको खेल खेल्नुहुन्छ, यो तपाईं टेबलमा बस्दै हुनुहुन्छ। अर्को तर्फबाट तपाइँको सामना गर्दै, त्यहाँ एक डिलर हुनेछ। खेलको सत्रमा हुँदा एक डिलर जो धेरै धेरैमा नियन्त्रणमा छ। सामान्यतया भन्ने हो भने, घरलाई प्राय जसो परिस्थितिमा सानो लाभ दिइन्छ। यसैले, दिइएको रातमा, व्यक्तिगत हातहरू कसरी खेल्दछन् भन्ने पर्वाह नगरी यो अगाडि आउनु पर्छ।
धेरै कूपहरू समावेश:
नामको बावजुद, यहाँ त्यस्तो केहि छैन जुन तपाईंलाई अलार्म गर्नुपर्दछ। जब तपाईं ब्याकार्टको एक खेल खेल्दै हुनुहुन्छ, यो शब्द मानिसहरूले प्रत्येक खेलको पूर्ण चरण वर्णन गर्न प्रयोग गर्दछ। धेरै जसो अ games्ग्रेजी कार्ड गेमहरूले यसलाई केवल एक पालो कल गर्दछ।
ती प्रत्येकमा तीन सम्भावित परिणामहरू छन्:
प्रत्येक पालोको बखत, त्यहाँ तीन सम्भावित परिणामहरू छन्। कार्डहरू कसरी टेबलमा राख्दछन् त्यसमा निर्भर गर्दै, तपाईंले हात जित्न सक्नुहुनेछ वा हात हराउन सक्नुहुनेछ। साथै, टाईको सम्भावना पनि छ। अन्य क्यासिनो कार्ड खेलहरूको विपरीत, तपाईं आफ्नो हात गुमाउनुभए पनि तपाईं पैसा कमाउनको लागि यो सम्भव छ। हुनसक्छ, यो सुविधा जसले खेललाई यतिखेर आकर्षक बनाउँदछ passerby को लागि।
बिभिन्न भिन्न संस्करणहरूले संसारभरका जुवाइहरुको मनोरन्जन गर्न जारी राख्छ:
अवश्य पनि, अनुभव भएकाहरूसँग अज्ञात स्थापनामा प्रवेश गर्दा थोरै दिक्क लाग्न बाध्य छन्। यति लामो इतिहासको साथ, यो अचम्मलाग्दो हुनेछ कि सबैजनाले सम्पूर्ण संसारभरि समान सेटको नियमहरू प्रयोग गर्थे। अवश्य, केहि क्षणहरूमा, सबै भन्दा भिन्न प्लेयरहरूको ब्यान्डले कुनै पनि स्क्वाबलहरू मिलाउन सक्छ। जेसुकै भए पनि, यस्तो देखिन्छ कि नियमहरूको तीन विशेष सेटहरू प्रायः सबै क्षेत्रहरूमा लोकप्रिय भएका छन्। केहि क्षेत्रहरुमा, खेल को एक विशेष व्युत्पत्ति मान्छे दिमाग मा हावी हुन सक्छ। अझै, केहि माईल टाढा, कहानी पूर्ण केहि केहि अर्को हुनेछ।
कसरी ब्याक्र्याट खेल्ने?
त्यसोभए, अवसरको यो रोमाञ्चक खेलको इतिहासको ’boutमा पर्याप्त छ। स्पष्ट रूपमा, यदि यो यति धेरै वर्ष पछि पनि हो, यसको ’boutमा केहि धेरैको लागि सार्थक हुनुपर्दछ। यदि तपाईंले कहिल्यै ब्याकार्टको खेलमा सही शर्त कल गर्ने थरिल महसुस गर्नुभएको छैन भने, त्यसोभए तपाईं आफ्नो जीवनको सबैभन्दा जंगली सवारीको लागि हुनुहुन्छ। चाहे तपाइँ अनलाइन वा व्यक्तिगत रूपमा खेल्नुहोस्, एक पटक तपाइँले यसको ह्या get्ग पाउनु भए पनि यो एकदमै सनसनी हुनेछ।
प्राय: जसो क्यासिनोहरूले to देखि standard मानक आकारको card२ कार्ड डेक बीच प्रयोग गर्दछ:
महाद्वीपदेखि महाद्वीपमा, कार्डहरूको मानक डेकमा individual२ व्यक्तिगत एकाइहरू हुन्छन्। यद्यपि असफल बिना, यस्तो देखिन्छ कि क्यासिनोहरूले एकल टेबलको लागि तीन वा बढी प्रयोग गर्दछ। अवश्य पनि, यसले यो सुनिश्चित गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ कि तथ्याical्क विसंगतिहरू तपाईंको पक्षमा प्रायः जसो काम गर्दैनन्। यद्यपि एक हजार डेकसमेत अझै खेलाडीले डेमेमेट गर्न सक्दछन् जुन अवसरको लागि पर्याप्त मेहनती छ।
प्रत्येक पालोको बखत, डिलरले कार्डहरू बाहिर पठाउनेछ:
एकचोटि तपाईं टेबलमा बस्नुहुन्छ, तपाईंलाई तपाईंको बाजी लगाउन सोधिनेछ। तपाइँ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर गर्दै, हामी सानो कुराबाट सुरू गर्न सुझाव दिन्छौं। जोसँग पहिले कहिल्यै जूवा खेलेको छैन, सुरूमा केवल थोरै पैसा कमाउनु उत्तम हुन्छ। अन्यथा, भाग्यको अनियमित निर्णयहरूको डंक हाम्रो बीचमा एकदमै स्टिक पनि समेट्नको लागि पर्याप्त हुन सक्छ।
सबैजना सुरू हुनु अघि, तपाईले एक शर्त राख्न सक्नुहुन्छ कुन पार्टी आउँदै गरेको राउन्डमा विजयी हुनेछ:
एक पलंग ओछ्यान राखिए पछि, डीलरले कार्डहरू हस्तान्तरण गर्न सुरू गर्दछ। तिनीहरू मध्ये केही टेबुलमा अनुहार सुल्नेछन्। अर्कोतर्फ, अरूहरू सबै हेर्नका लागि अनुहार खडा हुनेछन्।
१० भन्दा कम कुनै पनि चीजले यसको अनुहार मान राख्छ:
मानसिक गणनाको शक्तिको प्रयोग गरेर, उनीहरूको अनुहारमा संख्यात्मक साइन इन सबै कार्डहरूको लागि स्कोर थप्नुहोस्। यो गर्न, कार्डलाई यसको अ value्कको रूपमा यसको अंकको रूपमा मान दिनुहोस्।
रोयल्टी कार्ड र १० कार्डहरूलाई शून्यको मान तोकिएको छ:
एकचोटि तपाईंले संख्यात्मक कार्डहरू समाप्त गरेपछि, तपाईं रोयल्टीको अनुहार बोक्नेहरूमा जान सक्नुहुन्छ। तिनीहरूका लागि तपाईले शुन्यको सबै मान दिनुहोस्।
एसेस गणना १:
अन्त्यमा, कुनै पनि खेलको लागि, तपाइँ उनीहरूलाई राम्ररी योग्य १ तोकिदिनुहुनेछ। जसले उनीहरूलाई खेलमा बहुमुखी कार्डहरू बनाउँदछ। विशेष गरी अनुभवी खेलाडीको हातमा, राम्रो समयको इक्का कार्ड टाइडलाई परिवर्तन गर्ने कुरा हुन सक्छ।
अन्त्यमा, हातको समग्र मूल्य निर्धारण गर्न तपाईंको हातमा दुबै कार्डहरूको मानहरू थप्नुहोस्:
एकचोटि तपाईंले सबै कार्डहरू तिनीहरूको मूल्य तोक्नुभयो, तपाईं प्रत्येक हातको अन्तिम मूल्य निर्धारित गर्न सक्नुहुनेछ। प्रत्येक हातको मूल्य गणना गर्न, हातमा प्रत्येक कार्डको मान जोड्नुहोस्। परिणामस्वरूप केहि त्यो हो जुन तपाइँले त्यो गोल जितेको निर्धारण गर्न प्रयोग गर्नुहुनेछ।
ब्याक्र्याट रणनीति चार्टहरू के हुन्?
अवश्य पनि, ब्याक्र्याटमा पुग्ने धेरै नयाँ व्यक्तिहरू मौकाको खेलसँग अपरिचित छैनन् जहाँ उनीहरू घर विरूद्ध खेल्छन्। वास्तवमा, विश्वका सबै भन्दा प्रतिभाशाली जुवा खेलाडीहरूले ब्ल्याकज्याक जस्ता खेल खेल्ने दाँत काट्छन्। यति धेरै समानताहरूसँग, ती प्लेयरहरूको लागि तालिकामाथि प्रभुत्व जमाउन सजिलो हुन्छ, हैन?
अन्यथा, प्रतिभालाई विश्वास गर्ने मानिसका लागि त्यो के हो? भाग्यवस, हाम्रो विचारमा, यस सबै साधनहरू भनेको ब्याक्र्याट यो क्यासिनोमा भएका अन्य खेलहरूको तुलनामा शुरुवातको लागि धेरै बढी पहुँच योग्य हो।
ब्ल्याकज्याक विपरीत, नयाँ प्लेयरहरूको लागि नियमहरू थोरै नरम हुन्छन्
जब तपाईं ब्ल्याकजेक खेल्दै हुनुहुन्थ्यो वा उत्तम ब्ल्याकजेक निर्देशित र रणनीतिहरू पढ्दै हुनुहुन्थ्यो, नियमहरू विशेष रूपमा कडा छन्। तसर्थ, एक टेबल तैयार गर्न सजिलो छ जसले तपाईंलाई खास परिस्थितिमा ठीक के गर्ने भनेर बताउँछ। यस्तै विस्तृत विविधताका साथ परिणामहरू खेल गर्न बेकार्याट जस्ता केही गर्न सजिलो छैन।
याद गर्नुहोस्, बैंकमा सफल बेट्सको एक विनियुक्त कमीशन छ जित्नेबाट कटौती गरियो:
यो गाह्रो भएता पनि, अरूले उनीहरूका फाइदाहरूमा बढी फाइदा लिन कुनै पनि कुराले बाधा पारेको छैन। कहिलेकाँही, एउटा नयाँ परिप्रेक्ष्यले सम्पूर्ण उद्योगले केही चीजलाई हेरेको तरिकाले हल्लाउन सक्छ। यो त्यहाँ भएको लामो समय सम्म, कसैले पनि कहिल्यै यो अवसरको लागि हेरेको थिएन यो के थियो भनेर।
जब टाईको साथ प्रस्तुत गरिन्छ, रणनीतिहरू तिनीहरूको जटिलतामा गुणा गर्न सक्छन्:
अन्तमा, प्रायः जसो परिस्थितिहरूमा तपाईले सही चाललाई स्पष्ट पार्नका लागि पर्याप्त सजिलो पाउनुहुनेछ। अर्कोतर्फ, यदि तपाई टाईको साथ पालो समाप्त गर्नुभयो भने चीजहरू धेरै नराम्रो हुन्छन्। यदि त्यसो भएमा, त्यसोभए तपाईं त्यस घरको फाइदाको लागि कत्ति मूल्यवान् छ गम्भीरतापूर्वक विचार गर्न चाहानुहुन्छ। कहिलेकाँही, उत्तम हुन्छ यदि तपाईंले कटु अन्त सम्म जारी गर्नुभयो भने। अझै पनि, केहि परिस्थितिहरूमा पछाडि फर्कनु बेइमानीको निर्णय हुने थिएन। यो भन्दा पहिले लडाई भन्दा मर्न भन्दा अर्को दिन लड्न राम्रो हुनेछ? यस्तै प्रश्नहरूले हाम्रा पुर्खाहरूको हजारौं वर्ष पहिले कष्ट भोगेको थियो। आज, दैनिक आधारमा उस्तै युद्धहरू हाम्रो दिमागमा भइरहेका छन्।
शुरुआतीहरूको लागि ब्याक्र्याट गाइड
मानौं तपाईं सुरू गर्न चाहानुहुन्छ। जहाँसम्म, तपाई कहिले पनि क्यासिनो भित्र पस्नुभएन वा अनलाइन क्यासिनो मा खेल्नुहुन्न, तपाईको चिन्तित चीजहरू कसरी तपाई एक पटक व्यवस्थित हुन्छन् भन्ने ’bout कसरी चिन्ता गर्नुहुन्छ। अवश्य पनि, धेरै कथाहरू अफिसको वरिपरि जताततै मानिसहरू कसरी साताको अन्तमा ठूलो जितेर जान्छन्।
अझै, तपाईंले आफ्नो डराउने कथाहरूको साझा साझेदारी भन्दा बढी देख्नु भएको छ जो एक विस्तारित बन्डर पछि अज्ञात जुवा खेलाडीहरूको लागि साइन अप गर्नुपर्दछ। सबै चीजहरूको रूपमा, मध्यम कुञ्जी हो। कमसेकम यससँग, तपाईंको रणनीतिले प्रभाव पार्छ कि खेलको नतीजा अन्तमा कस्तो देखिन्छ।
सबैभन्दा पहिला र यो, यो सधैं राम्रो विचार हुन गइरहेको छ जाँच्न कसरी संसारको प्रख्यात खेलाडीहरू आफ्नो लक्ष्यहरू पछ्याउन। तिनीहरू जहाँ छन् त्यहाँका लागि, तिनीहरूले प्रविधिको विकास गर्नुपर्‍यो जुन सबैभन्दा धूर्त अन्वेषकहरूलाई समेत समावेश गर्न सक्दछ। तिनीहरूको उदाहरण अनुसरण गरेर, तपाईं केही बरु शानदार हाइटहरूमा सर्टकट सक्रिय पार्नुहुनेछ।
जोखिम व्यवस्थापन जसले सफल बृद्धिकर्ताहरूको रोमाञ्च प्रेम गर्दछ:
पेशेवरहरूले कसरी समस्याहरू खेल्छन् भनेर विश्लेषण पछि, तिनीहरू सजिलैसँग जस्तो क्यासिनोमा पुग्दैनन् भनेर सजीलो छ। यो एक खेल हो कि यसलाई हेर्नुको सट्टा, तिनीहरू यसलाई एक पेशाको रूपमा सोच्दछन्। फलस्वरूप, तिनीहरूले यसलाई यसको प्रत्येक घटक विवरणमा बिच्छेद गरेका छन्। यसैले, धेरै जसो अवसरहरूमा, तपाई विस्तारै हावामा तैरिरहेको प्रेरणाको क्षणहरूमा प्रशस्त बुद्धि पाउनुहुनेछ।
ब्याकार्ट शर्त रणनीति
ठीक छ, यस बिन्दुमा, तपाइँले टेबुलमा बस्नुभएपछि खेलको संरचना कसरी देखिनेछ भनेर एक उचित समझ पाउनुभयो। तपाईंको जान्नको लागि बाँकी सबै यो हो कि तपाईं कसरी आफ्नो शर्त रणनीतिकरण गर्नुपर्छ। एकचोटि तपाईंले पाउनुभयो कि तपाईंको बेल्ट मुनि, तपाईं घर मा ढोका प्रवेश मा ढोका प्रवेश गर्ने जो कोही संग हिंड्न तयार हुनेछ। धन्यबाद, यो खेल घर बिरूद्ध खेलाडीहरु पिट्स पछि, त्यहाँ सक्रिय खेलाडीहरु बीच camaraderie को भावना हुन जान्छ।
रणनीतिक योजनाको साथ घरको किनारमा सन्तुलन:
यो घरको किनारमा कति गणना गर्ने सम्भावना छ, हामी यस कुञ्जी जानकारीको फाइदाको लागि उपयोग गर्न सक्छौं। केवल ठूलो बेट्स राखेर जब उनीहरूको फाइदा कम हुन्छ सबैभन्दा सानो हुन्छ, तपाई आफ्नो विचित्रतालाई ठीकसित अनुकूलन गर्नुहुनेछ। त्यसकारण, यो तपाइँको शर्त कहिले राख्ने को ’bout मा मात्र थाहा छैन। तपाईंले उनीहरूलाई राख्नुहुँदा तपाईंले अधिकतम इष्टतम आकार के हो भनेर पनि विचार गर्नुपर्छ।
एक आक्रामक दृष्टिकोण केहि अवसरहरूमा आवाश्यक हुन्छ:
रात कसरी जान्छ भन्नेमा निर्भर गर्दै, तपाइँ आक्रामक दृष्टिकोणमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ। मानौं तपाईं केही घण्टाको लागि राम्रो हात फेला पार्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ। यस बिन्दुमा, तपाईको केही अंशलाई लाग्छ यो एक रात कल गर्नु राम्रो हुन्थ्यो। अझै, तपाईंको जेबमा अन्तिम केहि डलरको साथ, तपाईं सम्पूर्ण कथा लेख्न सक्नुहुन्छ। असिना मरियम शर्त राखेर, रातको अन्तिम हातले अन्तिम निर्णय निर्णय गर्दछ। केहि अवसरहरुमा, तपाईलाइ नतिजाबाट खुशी हुन्छन्।
कहिले फेरि डायल गर्ने सिक्नु पनि त्यस्तै महत्त्वपूर्ण छ:
धेरै जसो भागका लागि, यो खेलाडीहरूको लागि जब यो अप्टिकल रूपमा राख्नु पर्छ भनेर जान्न धेरै सहज हुन्छ। के वास्तवमा धेरै नयाँ आगमनलाई निराश पार्दछ जस्तो उनीहरूले डोरीहरू सिक्छन् ठीक विपरित हो। कहिलेकाँही, तपाईलाइ लाग्छ कि तपाई तातो लकीमा हुनुहुन्छ। यसका साथै, अन्तिम धेरै हातहरूका लागि, तपाईंको कलहरू पैसामा सही छन्। अझै, यो यस बिन्दुमा छ कि प्राय जसो एमेच्योरहरूले आफैंको नियन्त्रण गुमाउन थाल्छन् नकारात्मक भावनाहरूको अप्रिय प्रभावका लागि धन्यवाद। आत्म संयम को एक modicum अभ्यास गरेर, तपाईं एक विजेता को रूपमा तालिकाबाट टाढा हिंड्न जब सिक्नुहुनेछ। यसको सट्टामा, तपाई धेरै मानिसहरूलाई अनुग्रहको उचाइबाट डुबाउनुहुनेछ किनकि उनीहरू लामो समय सम्म बस्छन्।
तपाईलाई जित्न मद्दतको लागि उत्तम ब्याक्र्याट सल्लाह र युक्तिहरू
प्रतिस्पर्धीहरूलाई कुटपिट गर्दा, भ्रामक जानकारीबाट ठोस सल्लाह भिन्न पार्नु महत्त्वपूर्ण छ। यस्तो विवेकविना, तपाईं अध्ययनको एक टन खर्च गर्नुहुनेछ।
यद्यपि अन्तमा तपाईले खेल अझ कठिन बनाउनु हुनेछ। तल, हामीले व्यक्तिले सिक्न सक्ने दुई सब भन्दा प्रभावकारी तरिकाहरूको ’boutमा केही जानकारी लेखेका छौं।
यद्यपि त्यहाँ थप अतिरिक्त रणनीतिहरू छन्, यी संग, तपाईं तपाईं आफ्नो पक्षमा नहुने समस्यालाई विश्वसनीयताका साथ सुझाव दिन सक्नुहुन्छ।
जब सम्म तपाईं तिनीहरूलाई उचित रूपमा लागू गर्नुहुन्छ, यसले तपाईंलाई तपाईंको अनुहारमा मुस्कानका साथ घरको पैदल यात्राको सम्भावना सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। यदि तपाईंले हामीलाई सोध्नु भयो भने हामी भन्छौ कि यो सार्थक प्रयास हो।
केही उदाहरणहरूमा, शुरुवातकर्ताहरूले अभ्यासमा अन्य लोकप्रिय प्रविधिहरूको तुलनामा यो विधि बढी पहुँचयोग्य फेला पार्दछन्। किनकि तपाईले कुनै गणित प्रयोग गर्न आवश्यक छैन, यो कार्ड गणना जस्तै केहि विश्लेषणात्मक रूप मा छैन। यद्यपि यसलाई द्रुत कार्य गर्ने मेमोरी चाहिन्छ। अन्यथा, तपाईं कार्ड बीचमा प्रचलित ट्र्याक गर्न असक्षम हुनुहुनेछ।
यस प्रविधिको साथ, कुन कुनामा घुमाएको नोटिस गर्नुहोस्: सामान्यतया, तपाइँ यसमा कुनै चिपहरू फ्याँक्नु अघि तपाईं केही बेर टेबुल वरिपरि बस्न चाहानुहुन्छ। जब हामी हेर्दै थियौं, विशेष कार्डहरूको किनारालाई नजिकबाट अध्ययन गर्नुहोस्। यदि तपाईंले पर्याप्त ध्यान दिनुभयो भने, तपाईंले देख्नुहुनेछ कि विशेष कार्डहरू एक पहिचानयोग्य ढ be्गमा झुकेको छ।
कार्डहरू झार्न नबिर्सनुहोस्: लामो अध्ययन गरेपछि, तपाईं तिनीहरूको उपस्थितिमा आधारित सही कलहरू गर्नुहुनेछ। अवश्य पनि, आफैं कहिले पनि कार्डहरू थिएनन्, किनकि यो क्यासिनोको नियमको बिरूद्ध हो। यदि तपाइँ कार्डहरू खर्च गर्दै पक्राउ पर्नुभयो भने, तपाइँ सम्भावना भन्दा स्थापनाबाट बाहिर फालिनुहुनेछ। अझै पनि, क्रोधित भुइँ प्रबन्धकले तपाईंलाई धमकाउन नदिनुहोस् जब तपाईंले केही गलत गर्नुभएको छैन। कार्डमा हेर्नु कुनै अपराध होईन, यदि यसले तपाईंको जितको अड्चनलाई सुधार गर्दछ।
अवश्य पनि, तपाइँ कार्ड खेलहरूमा लागू गर्न सक्नुहुने सबैभन्दा प्रख्यात प्रविधि असंख्य चलचित्रहरू र अन्य लोकप्रिय मिडियाद्वारा लोकप्रिय बनाइएको छ। नतिजाको रूपमा, विश्वभरि सबैले कार्ड गणनाको ’boutमा सुनेका छन्। यद्यपि यो कथाको सामान पनि हुनसक्दछ। यो गणित को साथ एक सीमित मात्रामा प्रतिभा को आवश्यकता छ, सबैलाई यो शुरू मा चाहेको जस्तो सजिलो छैन। जेसुकै होस्, जबसम्म तपाईं प्रतिबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ, यो राम्रोसँग सिक्नको लागि पर्याप्त पाठ सिक्नु त्यति नै गाह्रो छैन जति धेरै तपाईंले विश्वास गर्नुहुनेछ। यसैले हामीले तलको मूल सिद्धान्तहरूको सारांश प्रस्तुत गरेका छौं।
कोर कार्ड गणना सिद्धान्तहरू
धेरै बिभिन्न विधिहरू अवस्थित छन्: यदि तपाईं खेलमा पर्याप्त समयदेखि आउनुभएको थियो भने, त्यसोभए तपाईंसँग संसारभरका मानिसहरूले कार्डहरू कसरी गन्ने भनेर बताएका थिए। यस्तो देखिन्छ कि त्यहाँ केहि भन्दा बढि प्रविधिहरू छन् जुन प्रभावकारी रूपमा चलाउन सकिन्छ। अझै, उत्तम हुन्छ यदि तपाईं टेबुलमा तपाईंको पहिलो केहि समयको लागि तुलनात्मक रूपमा सीधा टेक्निक प्रयोग गर्नुभयो। यस तरिकाले, तपाईं एक त्रुटिपूर्ण त्रुटि गर्न सक्ने कम सम्भावना हुनुहुनेछ जसले तपाईंलाई तपाईंको जीत जित्छ।
सब भन्दा लोकप्रिय “-१,०, + १” विधि हो: निम्न चरण-दर-चरण गाईडमा, हामी तपाईंलाई सबैभन्दा सामान्य विधि कसरी प्रयोग गर्ने भनेर देखाउनेछौं। यो पहिलो एमआईटी विद्यार्थीहरूको समूह द्वारा लोकप्रिय गरिएको थियो जसले कलेजमा छँदा सप्ताहन्तमा लस भेगासमा ठूलो जीत हासिल गर्न सफल भए। सायद तपाईले यस समूहको ’boutमा चलचित्र देख्नु भएको हुन सक्छ। विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, ती सबै कानुनी कथामा आधारित थियो। ती बच्चाहरूले वास्तवमै त्यो भयानक साँझमा घरलाई जित्न प्रबन्ध गरे। उनीहरूको पाइला पछ्याउँदा, तपाईंसँग महिमामा साझेदारी गर्ने अवसर पनि हुन्छ। यसका साथै तपाई अरू के गर्न खर्च गर्नुहुन्छ? यससँग, तपाईं कम्तिमा एक आय-उत्पादन कौशल सीखने हुनेछ।
अनुहार मान सहित कार्डहरूका लागि than भन्दा कम: यी सबै कार्डहरूले -१ को मान प्राप्त गर्नेछन्। तसर्थ, जब तपाईं तिनीहरूलाई व्यवहार देख्नुहुन्छ, तपाईं आफ्नो टाउको मा कुल बाट एक घटाउनुहुनेछ। जसरी हरेक हातले प्रगति गर्दछ, तपाईले रातीभर गर्न जारी राख्नुहुनेछ।
कार्डहरू मार्फत the र १० बीचका मानहरू: जब तपाईं यी मध्ये कुनै खेलमा देख्नुहुन्छ, तपाईं राहतको गहिरो सास लिनुहुनेछ। किनकी तिनीहरू शून्यको मानमा तोकिएउटाो छ, तपाईंले कुनै पूर्ण कुल ठीक राख्न कुनै पनि मानसिक थप गर्नुपर्दैन।
शाही कार्ड र एसेसका लागि: यसको अनुहार मानको आधारमा १० भन्दा बढि मूल्यको केही पनि +१ को मान प्राप्त गर्नुपर्दछ। जस्तो कि, एक पटक तपाईले देख्नु भयो कि डिलरले तल झर्छ, तपाईको चालु मानसिक कुलमा १ थप गर्नुहोस्। तपाईका लागि सँधै सही मानसिक गणना कायम राख्न यो महत्त्वपूर्ण छ। अन्यथा, तपाईंले अन्य परिस्थितिमा प्राप्त गर्न सक्ने फाइदा हराउनुहुनेछ।
प्रत्येक कार्डमा ध्यान दिइए जस्तै ध्यान दिनुहोस्: तपाईं कहाँ खेल्नुहुन्छ, डिलरको गतिमा ती कार्डहरू राख्ने बित्तिकै ठूलो भिन्न हुन सक्दछ। यदि तपाईं मानसिक गणितमा राम्रो हुनुहुन्छ भने, तपाईं ढीलो मानसिक प्रक्रियाहरू भएको भन्दा बढी सजीलो गणना गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। अवश्य पनि, तपाईले यस्तो ठाउँ फेला पार्न सक्नुहुनेछ जुन कार्ड बिस्तारै प्ले गर्दछ, तपाईलाई कुनै पनी समस्या भए पनि हुँदैन।
खेल अगाडि बढ्दै जाँदा, दौडको स्कोर आफ्नो टाउकोमा राख्नुहोस्: नम्बरहरू जोड्न जारी राख्नुहोस् तपाईंको टाउकोमा। अहिलेको लागि, यो केवल एक प्रतिक्षा खेल हो कि तपाईं मानसिक रूपमा सक्रिय रहन आवश्यक छ। सही समय नआएसम्म, तपाईंले प्रत्येक हातले लिने जोखिमलाई सीमित गर्न जारी राख्नुहोस्। अन्यथा, तपाईंसँग टेबुलमा पर्याप्त चिप्स रहनेछैन यो उत्तम अवसरको लाभ उठाउनको रूपमा यो पारित हुनेछ।
एकचोटि समग्र कुल भारी ध्रुवीकरण भयो, यो अब खाने समय हो: खेलको बखत, तपाईं अत्यधिक ध्रुवीकृत संख्याहरूको खोजी गर्नुहुनेछ। अर्को शब्दमा, एक पटक कुल उच्च मानमा पुगेपछि, तपाईले भारी बाजी लगाउन सुरू गर्न चाहानुहुन्छ। यो सकारात्मक वा नकारात्मक कुराले फरक पार्दैन। यो संख्याको निरपेक्ष मान हो जुन तपाईंको निर्णयहरूलाई निर्देशित गर्नुपर्दछ। उदाहरण को लागी, मानौं चलिरहेको कुल -12 पुग्छ। यदि त्यसो भएमा, त्यसो भए तपाईले एक टन पैसा राख्नु हुन्छ। ’cause, धेरै पहिले, त्यस कुल बराबर हुनै पर्छ। तसर्थ, तपाईंसँग एक सांख्यिकीय ग्यारेन्टी छ आगामी नाटकहरू अनुकूल हुनुपर्छ।